english news Archives - Setimadi Dainik — Setimadi Dainik
बाख्रा चराउन गएका उड बहादुरको हत्या कि भीरबाट लडेर मृत्यु ?
english news, Featured, समाज November 30, 2018 6:22 am
दमौली १४ मंसिर । गत मंसिर ५ गते देखि वेपत्ता भएका ऋषिङ गाउँपालिका वडा नं १ का संयोजक एवं पूर्व गाविस उपाध्यक्ष उडबहादुर आलेको शव बुधबार फेला परेको छ । आलेको शव व्यास नगरपालिका वडा नं १३ स्थित बेनीकोटको भीरमा फेला परेको हो । आलेको शव भेटिएको स्थान उनको घरबाट […]
english news, Featured, समाज August 16, 2018 1:15 pm
दमौली ३१ साउन । व्यास नगरपालिकाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सल्लाहकारमा व्यास ११ निवासी राजेन्द्रबहादुर अधिकारी मनोनित भएका छन् । व्यास नगरपालिकाको साउन २३ गते बसेको बोर्ड बैठकले अधिकारीलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सल्लाहकारमा मनोनित गरेको हो । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सल्लाहकारमा मनोनित अधिकारीलाई अन्तराष्ट्रिय नगरपालिकाहरु एवं अन्तराष्ट्रिय नियोग तथा दाताहरुसंग व्यास नगरपालिकाको सम्बन्ध विकास […]
डा. गोविन्द के.सी.को सर्मथनमा नेविसंघ तनहुँले आज दमौलीमा निकालेको रयाली । तस्बिरःसेतीमादी ।
english news, Featured, राजनिति July 20, 2018 3:33 am
दक्षिणी भेगको विकासको जिम्मा काग्रेसले लिन्छ —भण्डारी
english news, Featured, राजनिति November 14, 2017 11:35 am
प्रकाश अधिकारी भिरकोट २८ कार्तिक । नेपाली काग्रेसका कन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधी सभा क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार शंकर भण्डारीले तनहुँको दक्षिणी भेगको विकासको जिम्मा काग्रेसले लिने बताएका छन् । त्यसमा पनि व्यक्तिगत रुपमा यस क्षेत्रको विकास जिम्मा आफूले लिने भण्डारीको भनाई रहेको थियो । विगतमा पनि काग्रेसले दक्षिण […]
भारतीय निर्वाचन परिणाम, हिन्दूत्वको मुद्धा र नेपाली राजनीतिमा पर्न सक्ने प्रभाव
नेकपा तनहुँको जम्बो जिल्ला कमिटिमा को –को अटाए त ?
सहिद पत्नीको निधन प्रति दुःख व्यक्त
राजधानीको टँुडिखेलकै शैलीमा दमौलीको खुल्ला चौर अतिक्रमण हुँदै
खिचातानी बन्द गर